इतिहास रचेकी पहिलो मधेसी महिला एआईजी – Globalpatrika
मुख्य पृष्ठसमाजइतिहास रचेकी पहिलो मधेसी महिला एआईजी
इतिहास रचेकी पहिलो मधेसी महिला एआईजी
काठमाडौं –मधेसकी छोरी आशा सिंहको बाल्यकाल भने काठमाडौैंमा बित्यो । उनले सानो गौचरनमा रहेको एउटा सामान्य सरकारी विद्यालयमा कखरा सिक्न थालिन् । बसाइँ काठमाडौं, तर आधा परिवार मधेश तिरै थियो । उनी पनि मीन पचासको विदा हुनासाथ सर्लाही जान्थिन् । साथीहरूसँग देहात डुल्थिन् । आँपका रुखहरूमुनि छिचिमिरा र पुतलीहरू समाउँथिन् ।
कागजको डुंगा बनाएर भैंसी नुहाउने पैनीमा तैराउँदै रमाउँथिन्। सानो छँदा मधेसमा बिताएका ती उन्मुक्त पलहरू सम्झिँदा अहिले पनि उनी नोष्टाल्जिक हुन्छिन। उनी ती निश्छल सखाहरू सम्झिन्छन्, जसको मायाले हरेक हिउँदमा उनलाई डोर्‍याउँदै मधेसका खेत – खलयानहरू सम्म पुर्‍याउँथ्यो। माओवादीले राज्य विरुद्ध युद्ध सुरू गरेकै वर्ष अर्थात् विक्रम सम्वत् २०५२ मा नेपाल प्रहरीमा इन्सपेक्टर पदमा भर्ना भएकी आशा सिंह झण्डै अढाई दशकको अथक परिश्रमपछि एआईजी बन्न सफल भएकी छिन् ।
उनी नेपाल प्रहरीको यति उच्च ओहोदामा पुग्ने पहिलो मधेसी महिला हुन्। गृह मन्त्रालय, लोक सेवा आयोग र नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित बढुवा समितले आशा सिंहलाई पुस १६ गते एआईजी (अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक)मा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो । बढुवा समितिको त्यो सिफारिस मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेपछि बुधबार आशाले एआईजीको फुली लगाएकी छन् र नयाँ इतिहास रचेकी छन्, पहिलो मधेसी महिला एआईजी।
नेपालको आधा जनसंख्या महिला भए पनि नेपाल प्रहरीमा महिलाको संख्या अत्यन्तै न्यून छ । सन् २०१५ मा नेपाल प्रहरी आफैंले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल प्रहरीमा सेवारतमध्ये ७ प्रतिशतमात्रै महिला छन् । तीमध्ये अधिकांश तल्लो दर्जाका छन् । अहिलेसम्म कुनै महिला नेपाल प्रहरी प्रमुख भएका छैनन् ।
प्राविधिकतर्फको एआईजी पदसम्म पनि यसअघि एक मात्रै महिला पुगेकी छिन्, डा. दुर्गा थापा । उनीपछि एआईजी हुने महिला नै डा. आशा सिंह हुन्।